3 asbuuc jir - Somali Kidshealth
Dhamaadka asbuuca sadexaad hooyooyinku waxay kala ogaadeen dhibaatooyinka caafimaad iyo kuwa caadiga ah ee ilmaha yar. Hooyadu waxay baratay dabeecada ilmaheeda ilaa xad, waxay kaloo baratay habka iyo jidwalka quudinta ilmaha iyo hurdada.
Ilmo 3 asbuuc jira
Asbuucan isbadalada dhallaanka waxaa ka mid ah iyada oo xuddunta gumadkeedii uu dhacayo. Meesha ay ka go’day xuddunta waxaa muhiim ah in ay qalayl ahaato, waayo maalmaha soo socda waa in ay buskootaa. Marka xudduntu ay go’do waa marka loo bilaabo qubayska dhabta ah ee ilmaha. Inta badan ilmaha yar asbuuciiba 2 jeer ayaa loo qubeeyaa.
Weli hurdada ilmuhu ma ahan mid la saadaalin karo, waayo weli caloosha ilmaha ma wayna oo wuxuu u baahan yahay in la quudiyo 2 saac kasta. Xilligaan carruurtu waxay seexdaan 16-18 saac maalintii, ilmuhu halkii hurdaba wuxuu jiifaa 2-3 saacadood.
Dhallaanka markay gaaraan 3da asbuuc ee ugu horeeya noloshooda waa feejigan yihiin. Waxay daawanayaan khariidada wajiga hooyadood. waxay samaynayaan codad yar yar oo ka duwan oohinta.
Talooyinka Asbuuca saddexaad
U seexi ilmaha xilliga uu hurdo jeego-jeego mar walba. Marka uu tooso ilmaha isku day cabaar inaad u seexisid callool-callool, waayo marka habkaan loo seexsho ilmaha waxaa koraya oo shaqo bilaabaya murqaha luqunta oo u sahla ilmaha inay madaxa kor u qaadaan,inay galgashaan ama ay gurguurtaan.
Xilligaan oohintu waa isgaarsiinta kaliya oo dhallaanku kula xiriiro hooyadiis. Markaa haddii oohini timaado waxaa jirta cabasho uu ilmuhu dareemaya sida gaajo, dhaxan, kulayl iyo isagoo dareemay maryaha uu ku jiifo ama uu qabo ay ku jiraan saxaro ama kaadi.
Haddii labada waalid midkood cabo sigaar waa markii la joojin lahaa cabista sigaarka, waayo qiica tubaakadu wuxuu ilmaha u horseedaa in sanbabkoodu kori waayo. Carruurta waalidiintood cabaan sigaarka waxay u nugul yihiin inay ku dhacaan cuddurada sanbabka iyo dhegaha.
PrevAsbuuca labaad Jir
nextHal bil jir